Khulisa i-bigx yakho ye-borax crystal geode
Iikristrist ezinkulu ezinkulu ziphelele, nokuba ufuna ukuhamba ukusuka kwi- borax crystal iceflakes okanye ufuna nje idwala elikhulu, elihle le-crystal. Ezi kristali zingakhula ngesimo se-geode okanye ngemibala emininzi, eyenza zibe zikhulu kumboniso wamaminerali.
I-Giant Borax Crystal Materials
Amacwecwe ahlambulukileyo (i-chenille craft stick)
I-Borax ithengiswa ngamatshini okuhlamba iimpahla njenge-cleaner. Ibuye ithengiswe njenge-insecticide, ngokuqhelekileyo njengombulali wokubulala.
Hlola ileyibhile yemveliso ye-borax okanye i-sodium tetraborate.
Ubukhulu obukhulu be-crystals buvela ezintweni ezimbini:
Isakhiwo okanye isalathisi apho i-crystals ikhula khona
Ukulawula isantya sokupholisa isisombululo sokwanda kwekristal
Into yokuqala okufuneka uyenze ukuguqula iimfayili zokucoca iimpepha ngendlela ofuna ngayo i-"rock" yakho okanye i-geode. Kuhlobo lombala, unokwenza nje udibanise iipelisi ezinqumlayo ukuphela uze uphephe kwi-rock shape. Ubungcolileyo abuyi kubala kuba uya kuguqa yonke i-mess with crystals. Ukuba i-geode, unako ukuvusa iipopeclean zibe ngumbono wegobolondo ongenanto. Usebenza kakuhle. Akudingeki ukuba uzalise ngokupheleleyo kwiindawo ezivulekileyo ngefipeclean fuzz, kodwa awufuni izikhala ezinkulu.
Emva koko, fumana isitya esincinci kunomfanekiso wakho. Ufuna ukukwazi ukubeka umxholo kwisitya, ngaphandle kokuba uthintele kumacala, kunye neendawo ezaneleyo ukuba unokuwufihla ngokupheleleyo ifom ngekhambi lesisombululo.
Susa isakhiwo kwisitya. Ubilise amanzi okwaneleyo ukuzalisa isitya esaneleyo ukuze ifihla ifom yefayile yakho. Hlanganisa kwi-borax de iyeke ukuphela. Enye indlela elula yokuqinisekisa ukuba unayo i-borax enokwenzeka kangangoko emanzini kukukhupha i-microwave umxube ekubileni.
Yongeza umbala wokutya. Iikristst ziza kukhanya ngaphezu kwesisombululo, ngoko ungakhathazeki ukuba kubonakala kunemibala enemibala.
Beka isimo sepipecleaner kwisisombululo. Ungadinga ukuyigubungela ngokukhawuleza ukukhupha iibhobho zomoya ukuze uqinisekise ukuba ayiyi kuhamba.
Yilapho ukupholisa okulawulwayo kusebenza khona. Ufuna isisombululo ukupholisa ngokukhawuleza ukuze ufumane ama-crystals amakhulu. Gubungela isitya ngenaliti okanye ipake. Ungayifungela ithawula elitshisayo okanye uyibeke kwindawo efudumeleyo,
Vumela iiyure ezimbalwa ukuba iikristali ziqale ukukhula. Kule nqanaba, sebenzisa i-spoon ukukhupha umlo ukusuka kwisezantsi. Awunakuyenza le nyathelo, kodwa kubonakala kulula ukwenza ukususa iikristali ekugqibeleni ukuba ukhululiwe kusasa. Vumela amakristali akhule iiyure eziliqela okanye ubusuku bonke.
Susa ifom evela kwisitya. Amakristali angaphelele ngoku okanye angabancinci kwaye afikeleleke ngokungaqhelekanga umzo (oqhelekileyo). Ukuba zilungile njengoko zinjalo, ungazivumela ukuba zome, kungenjalo ufuna iimfucu ezininzi.
Lungisa isisombululo esitsha, uchithe i-borax eninzi njengokuba unako ngamanzi, ukongeza umbala wokutya (akufuneki ube ngumbala ofanayo), kwaye udibanise ifom ye-crystal-covered. Amakristali amasha aya kukhula kwizinto ezikhoyo, ezinkulu kunye nezengcono. Kwakhona, ukupholisa okucothayo kukubalulekileyo kwiziphumo ezilungileyo.
Unokwenza olunye ujikelezo lwe-crystal-growing okanye uqedile iphrojekthi xa unelisekile ngobukhulu be-crystal. Vumela i-crystal eyomileyo kwiphilisi yephepha.
Ukuba ufuna ukugcina i-crystals ukuba ibonise, unokuwahlamba nge-wax yomgangatho okanye ipolisi ye-nail .
USara Evans: I-Star Star's Biography
Ukuzivocavoca ekusebenziseni iifom zexesha elidlulileyo
Jagjit Singh Bhajans kunye neengoma zeDevotional
Izicwangciso zeeNkokeli zeZikolo ezikhuthaza ukuphucula izikolo
Umculi uHenry Ossawa Tanner
Bathi yintoni ?! Iingcaphuno ezigqithisileyo ngabaPhathiswa boMongameli be-GOP